Izilwanyana ezingenamqolo kwii-aquariums | Ngeentlanzi
Izilwanyana ezingenamqolo zikwayinxalenye yeendawo zethu zasemanzini Logama sibathanda, kunjalo. Ke ngoko kuya kufuneka sithathele ingqalelo ezinye iinkcukacha zakho ukhathalelo kunye nokuziqhelanisa ne-aquarium yethu.
Kule ndawo uya kufumana iinkcukacha ezingapheliyo malunga nee-invertebrates ukuze ubazi ngcono kwaye ubonwabele ngokupheleleyo kwi-aquarium yethu. Iintlobo, ukutya, izifo, izongezo kunye nokunye okude. Oko kuyakonwabisa abathandi be-invertebrate ukuze baphile njengookumkani kwi-aquarium yethu yasekhaya.
Ungalibali ukuba sithetha ngezinto eziphilayo ekufuneka sizikhathalele, ke konke ulwazi lincinci ukuqinisekisa ubume balo.
Phakathi kwezona zinto ziphilayo zakudala esizifumana emazantsi olwandle sinama-cnidarians. Imalunga ne…
Xa siqala ukubeka yonke into efunwa yi-aquarium, usenokuzibuza ukuba uyafuna na iminenke ye-aquarium. I…
Amaxesha amaninzi ukhe weva ibinzana elithi "inyani iyabadlula abalandeli." Oku kuyenzeka xa ...
Namhlanje siza kuthetha ngodidi loononkala owaziwa njengelona likhulu ehlabathini. Imalunga ne...
Namhlanje siza kuthetha ngononkala waseMelika. Unonkala obomvu ovela emlanjeni kwaye ...
Ihlabathi le-jellyfish ligcwele ukuthanda ukwazi kunye neentlobo ezintle ngokwenene. Emva kokubona ngononophelo kunye nokuhlalutya ...
Mhlawumbi ukhe waliva ibinzana elithi "inyani ayaziwa kunentsomi." Ewe, akukho nto inokude iqhubeke ...
Namhlanje siza kuthetha ngolunye lweentlobo zezilwanyana ezibonakala ngokungafaniyo kwaye ...
I-jellyfish yaselwandle sesinye sezilwanyana zakudala ezikhoyo. Bebekho emhlabeni ngaphezulu kwezigidi ezingama-600 ...
Namhlanje asizukuthetha ngentlanzi njengoko sisenza amaxesha amaninzi. Namhlanje sidibana ...
Kule nqaku siza kuhamba ngokuchaza iintlanzi ukuya kwiintshulube zolwandle. Kule meko, siza kuthetha ngabacwangcisi….